न्यायाधीश बनाउने पनि जिम्मेवार
अधिवक्ता शिव सिग्देल--
न्यायालयमा न्याय रहेन भने न्यायपूर्ण समाज कसरी निर्माण हुनसक्छ ?
लोकतान्त्रिक पद्धति, गणतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन, समृद्धिको आधार भनेकै न्याय हो, न्यायालय हो, संविधान हो । न्यायालयको असफलता, अविश्वास र अकर्मण्यता बढ्नु भनेको कानुनी शासन व्यवस्था छैन भन्ने हो । हामीले खोजेको स्वच्छ न्याय, स्वच्छ शासन र स्वच्छ समाज हो । न्यायालयमा स्वच्छता हराउनु भनेको संविधानको असफलता र समष्टिमा पद्धतिकै असफलता हो । हामी सबै सहन गर्न सक्छौं, यति ठूलो त्याग र बलिदानबाट आएको ल्याएको पद्धति नै असफल पार्न न्यायालय अगुवा भयो भने कसरी सहन गर्ने ? यसकारण हामीले जसरी पनि जुनसुकै मूल्यमा न्यायालयको स्वच्छता कायम राख्नैपर्छ र जो जति बिचौलिया छन्, तिनको कलमी गर्नैपर्छ । यस कार्यमा जो कोही बाधक हुन्छ, त्यो संविधान बिरोधी हो । संविधान बिरोधी सुशासनको बिरोधी हो ।
आज न्यायालयमा जे देखिएको छ, त्यो औसत व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुको प्रतिफल हो । न्यायलयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउनुको कारण पनि हो । कानुनी छिद्रबाट अपराधीहरु उम्किने उम्काउने गर्नाले पनि हो ।
व्यक्ति त्यसै पनि महत्वाकांक्षा राख्छ । त्यस्ता असक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने संसद पनि जिम्मेवार छ । जसले सुनवाई गरे, के सुनवाई गरे । असक्षमलाई सक्षम भनेर टाँचा मार्नु र तिनका गलत क्रियाकलापलाई स्यावासी दिइरहनु सुनवाई हो ? जे जति संवैधानिक नियुक्तीहरु भइरहेका छन्, ती सबै गुणस्तरहीन व्यक्तिहरु हुन् । नातापाता, प्रभाव, पैसाका भरमा नियुक्त दिँदा राज्यसञ्जाल कमजोर भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रहार न्यायव्यवस्थामा भएको छ । न्याय व्यवस्था सकियो भने समाजमा बाहुबली शासन आउँछ । त्यसैले न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था सुधार्न सबैले योगदान गरौं ।